Ny vokatra dia mampiasa tsorakazo tariby manokana ho an'ny tariby amin'ny tetezana ho fitaovana manta. Ny habe lehibe dia wire5.0mm sy φ7.0mm andian-dambam-boaloboka vita amin'ny alàlan'ny aliminioma vita amin'ny alim-boasary vita amin'ny alimo, ary ny tanjaka am-pahefana dia avy amin'ny 1770Mpa ka hatramin'ny 2100Mpa, fialan-tsasatra ambany miaraka amin'ny fananana torsion, fampisehoana anticorrosion ambony. Mandroso ny haitao misy azy ary ny fitaovana fanosotra dia fiarovana ny tontolo iainana izay mahafoy ny fizotran'ny pickling ary mampiasa fanasana rano ultrasonic, electrolysis & fanasana alkali ultrasonic, fanamafisana-plating, fanamainana, mandalo ny fandroana zinc madio, avy eo amin'ny alàlan'ny fandroana alimina alimina. Ity dia sosona firaka vita amin'ny alim-boaloboka roa (galfan coating). Farany aorian'ny rafitra fanesorana azota dia mitohy, tsy miova ary milamina ny firakotra tariby. Miaraka amin'ny fitsaboana stabilization, ny tariby dia manana linearity tsara, ny refy avo lenta ary ny fananana fialan-tsasatra ambany. Ny tariby coil iray manontolo dia azo atolotra amin'ny halavany takiana fa tsy miaraka. Izy io dia mety indrindra ho an'ny tariby tena tariby, tariby inhaul (antsamotady), fantsom-pifandraisana ary rafitra hafa mitovy amin'izany.
Manana fitaovana manara-penitra isika. Ny vokatray dia aondrana any Etazonia, Angletera sns, mankafy laza malaza eo amin'ny mpanjifa amin'ny fivarotana mafana China Overhead Insulated Aluminium Conductor XLPE Insulated ABC Cable, manantena ny hanome anao ny entanay izahay mandritra ny fotoana akaiky ny lava fe-potoana, ary ho hitanao fa tena zava-misy ny teny nindraminay ary koa ny vahaolana avo lenta dia miavaka tokoa!
Fivarotana mafana Cable LTC China, Cable Overhead, Noho izany dia miasa tsy tapaka ihany koa izahay. izahay, mifantoka amin'ny kalitao avo lenta, ary mahatsapa ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana, ny ankamaroan'ny entana dia tsy misy fandotoana, varotra ara-tontolo iainana, mampiasa indray ny vahaolana. Nanavao ny katalaoginay izahay, izay manolotra ny fikambananay. n antsipiriany ary manarona ireo entana voalohany atolotray efa misy, Azonao atao koa ny mitsidika ny tranokalanay, izay misy ny làlan'ny vokatra farany indrindra. Manantena ny hamerenana indray ny fifandraisan'ny orinasa izahay.
Diameter nominal (mm) Tensile Strength Rm / Mpa Fitsaharana0.7 Fm, 1000h havizanana Ny lanjan'ilay firakotra isaky ny faritra iray g / m2 Adhesion amin'ny firakotra Akanjo fanamiana Fenitra
5.0 andiany7.0 andiany 1770,1860,1960,2000,2100 ≤2,5% fetran'ny adin-tsaina 0.45Fm, amplitude 360Mpa≥2 × 106 fotoana ≥300 mandrel ho 5Dn manodinkodina no. s≥8 Varahina varahina testgalvanized varahina≥4 tariby alimika alim-baravarana≥≥ in -2≥ NFA35-035ASTMA475GB / T17101JT / T1104
Teo aloha: PC Cut Length & Threaded Wire
Manaraka: PC Indered Wire